Tricks kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp pane yako iPhone (2/2) | IPhone nhau
Tiri pano nechinyorwa chechipiri cheiyi muunganidzwa ye "madhiri" atinotarisira kuwana zvakanakisa kubva kune akakurumbira meseji kunyorera pasi. WhatsApp zvirokwazvo ndiyo inonyanya kushandiswa mameseji mutengi kune wese munhu, pano uye chero kupi, zvese paApple neIOS, kutaura zvazviri tinoshandisa yakawanda nguva yatiri kushandisa iyo smartphone mune ino application, saka inguva yakanaka yekudzidza tora zvakanyanyisa kubva mazviri, nechinangwa chekusimudzira nekugadzirisa yega yega mafambiro atinoita mukati mayo. Usapotsa imwe chete yemazano edu kutora mukana weWhatsApp pane yako iPhone.
Chekutanga pane zvese, yeuka kuti haufanire kupotsa chikamu chekare chesaga ichi kana usati wakwanisa kuchiverenga, «Tricks kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp pane yako iPhone (1/2)»Ndiyo yekutanga here yemaposi maviri. Iye zvino tave kuzosiya matipi ekupedzisira kuti WhatsApp ive chishandiso uye kwete hope dzinotyisa, uye kuti WhatsApp ipfumo rinocheka nekwose, rinogona kutonga nguva yedu yemahara muzviuru nezviuru zvemapoka asina zvazvinoreva kana banal. Tinofanira kuziva maitiro ekudzora WhatsApp uye kusatendera WhatsApp kuti ititonge.
1 Tarisa zvakavanzika zvako, gadzirisa ndiani anowana ruzivo rwako
2 Iyo inofadza bhuruu kaviri tiki inogadzirisika zvakare
3 Archive, iwe hapana chaunowana nekubvisa hurukuro
4 WhatsApp simbe? Bvisa WhatsApp mapoka
Tarisa zvakavanzika zvako, gadzirisa ndiani anowana ruzivo rwako
Kana WhatsApp yakahwina chimwe chinhu nguva pfupi yadarika, iri muchivande, kwete chete nekuda kwekunyorera kwaiita senge kwaisazombosvika uye kwakaguma kwasvika svondo rino, asi zvakare nekuti, kwenguva yakati ikozvino, zvakatibvumidza kusarudza ma parameter akati wandei. izvo zvinogona kugonesa mashandisiro ayo, zvakare. sekuita kuti zviwedzere kuomarara kune avo vane tsika yekutsvinyira muhupenyu hwakavanzika hwevamwe. Nekudaro, mukati memenu yeiyo ichangobva kutumidzwa zita rekuti WhatsApp «marongero», muiyo «Akaunti» chikamu tichaona kuti chikamu chekutanga chikamu cheKuvanzika.
Ikoko tine sarudzo dzakasiyana:
Pakupedzisira nguva: Ndiani anogona kuona kubatana kwedu kwekupedzisira
Mufananidzo weProfile: Ndiani anogona kuona yedu yemufananidzo mufananidzo
Mamiriro: Ndiani anogona kuona chinzvimbo chedu
Nguva imwe neimwe patinodzvanya imwe yesarudzo idzi, tinogona kusarudza pakati pezvinhu zvitatu zvinobvumidzwa kana kusawana ruzivo rwedu, «zvose«,«Mis Vatengi"Kana"Hapana»Zvinozotibvumidza kuti tigadzirise ndiani achawana iyi data.
Iyo inofadza bhuruu kaviri tiki inogadzirisika zvakare
Kutya kwakarembera pamusoro pevashandisi veWhatsApp, kwaive kusisiri iko kwekupedzisira kubatana kwakatarisira kana iwe kana kuti usati waverenga meseji, iro bhuruu bhuruu rakaonekwa, mucherechedzo wekuti tanga taverenga meseji kana kwete. Nekudaro, inogadziriswa zvizere (kunyangwe izvi zvichizivikanwa nevazhinji vashandisi), unogona kudzima kuverenga kwekusimbisa mukupedzisira kweswitch muchikamu chega chega cheWhatsApp.
Archive, iwe hapana chaunowana nekubvisa hurukuro
Pamwe unogona kudemba zvakanyanya nekubvisa hurukuro zvachose, nekuti nhaurirano muzviitiko zvakawanda hadzina magwaro chete, ikozvino isu tinowanawo magwaro uye multimedia yatisingazomboziva patingaida. Saka, Tinokurudzira kuti iwe uchengetedze hurukuro panzvimbo pekudzima. Uye zvakare, kana zvasvika pakutsvedza kubva kuruboshwe uchienda kurudyi, kana isu tichiwedzera zvishoma, inongori mafaera, ichiita sarudzo yakasununguka.
Pamusoro pezvo, nekuchengeta hurukuro nguva nenguva, tinogona kuwana zviri nyore izvo zvinotifadza mune huru chats mapaneru, saka hurukuro kana mapoka ane zvishoma kufamba anozo chengetwa uye anodzoka kune yekutanga paneli pavanenge vachida kutarisisa kwako. Kuva nekukurukurirana kushoma mupaneru rekutanga kuchakubatsira iwe kuverenga nekushanda nekukurumidza paWhatsApp, pamwe nekuisa pekutanga kutarisisa kwaunopa iwe.
WhatsApp simbe? Bvisa WhatsApp mapoka
Kazhinji kuwandisa kweruzivo, hurukuro uye multimedia zvinoita kuti WhatsApp ive nematambudziko ekuuraya pane iOS, kunyanya mumidziyo ine 1GB ye RAM kana zvishoma, ndosaka tichikurudzira kuti nguva nenguva mubudise mamwe mapoka eWhatsApp ane zvakawanda zvirimo asi izvo zvisina basa, nenzira iyi huremu hwekushandisa hunodonha zvakanyanya, pamwe kuchenesa nguva dzese dzehurukuro dzakafa (dzakasara nenguva) kuchawedzera mashandiro echishandiso. Kuti tidurure chat isu tinongofanira kutsvedza chat iri mubvunzo zvishoma kubva kurudyi kuenda kuruboshwe, mune «… Plus»Kana isu tikadzvanya pop-up inoonekwa ine akati wandei sarudzo, tinodzvanya pa«isina» tauriranai ichava yakachena chose.
Tinovimba rairo yedu yanga ichikubatsira iwe, kana uine mazano matsva, usazeze kuvasiya mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tricks kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp pane yako iPhone (2/2)
kubvisa chat chat kunodzima chete mafoto mavhidhiyo audios uye nezvimwe, kana zvese zvinosanganisira hurukuro?
Zvese zvinosanganisira hurukuro.
Akafunga kuti chakanyanya kukosha pachinhu chekuvanzika ndechokubvisa ONLINE.